I-Ningbo Horizon Magnetic Technologies Co, Ltd. ingumkhiqizi ohlanganiswe mpo womazibuthe womhlaba ongavamile weNeodymium kanye nemihlangano yawo kazibuthe ehlobene nayo. Ngenxa yobuchwepheshe bethu obungenakulinganiswa kanye nokuhlangenwe nakho okucebile emkhakheni kazibuthe, singanikeza amakhasimende anhlobonhlobo yemikhiqizo kazibuthe kusuka ezibonelweni kuya ekukhiqizweni, futhi sisize amakhasimende ukuthi afinyelele kwizisombululo ezisebenza ngempumelelo.
Ukudoba Kwamacala Amabili…
RoHS futhi Finyelela imithetho
I-Neodymium magnet isetshenziswa kabanzi ezintweni zikagesi nezikagesi, futhi nasemikhiqizweni yabathengi noma kumathoyizi ezingane, ngakho-ke sithatha izinyathelo zokulawula nokuqinisekisa ukuthi imikhiqizo yethu kazibuthe ihambisana neRoHS ne-REACH.
Ikhwalithi yokuqala ngentengo yokuncintisana
Ngokuya ngefilosofi yekhwalithi yokuqala, sihlala sisebenzisa izinqubo zokukhiqiza nezokukhiqiza, nokuphathwa ukwenza ngcono izindleko zamakhasimende. Siyazethemba ukuthi ngekhwalithi efanayo intengo yethu incintisana kakhulu nezimbangi.
Isilinganiso samabhizinisi ethu aphakathi nendawo senza ukuxhumana okusheshayo phakathi kweminyango ehlobene nokuphendula kumakhasimende. Amandla okwakha ngaphakathi endlini kanye nokusungula okubanzi kwemihlangano ejwayelekile kazibuthe kuqinisekisa ukulethwa okulungile.
Umhlinzeki wokuma okukodwa
Umhlaba ovamile odonsa u-Neodymium kanye nemihlangano ehlukahlukene yama-Neodymium kazibuthe ikhiqizwa ngaphakathi endlini. Ubuchwepheshe bethu be-magnetics busenza sikwazi ukuthola eminye imikhiqizo kagesi oyinkimbinkimbi yamakhasimende ukuba abe nokuthenga okukodwa kalula.
qhubeka nezindaba zakamuva nezindatshana ezifakiwe ezimayelana nabazibuthe